နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Who know?
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:27 PM
khet myint myint February 20, 2010 at 1:17 AM
အမ်..ဒီက မြေအောက်ရထားကြောင့် လေဟပ်ပြီးလန်တာပါလို့ ဖြေမလို့ဟာကို၊ ဖြေပြီးသားကြီးဖြစ်နေပြီကိုး၊
khin oo may February 20, 2010 at 1:36 AM
khin oo may February 20, 2010 at 1:47 AM
မိန်းကလေးများကို အဝတ်အစားမပါဘဲကြည့်လျင်လှမည်ဆိုသည်ထက် ယခုကဲ့သို့ အဝတ်အစားကလေးနှင့်မလုံ့တလုံ့မပေါ့်တပေါ်ကြည့်ရသည်ကပိုလှသည်ဟုထင်မြင်မိသည်။
khin oo may February 20, 2010 at 2:21 AM
တော်တော်လေးဗဟုသုတရသွားတယ်။ တစ်ကယ်ကျေးဇူးတင်သွားပါတယ်။ အန်မတန် နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ အခန်းလေးတွေ ကိမြင်ဘူးကြားဘူး ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ ဆိုတာလေးတွေ အပြင် အဲဒီဇတ်လမ်းကိုပါအတိုချုပ်သွားဖတ်လိုက်သေးတယ်။ ဇတ်လမ်းကလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာ။
The billowy skirt of Monroe's white halter dress didn't ride up quite so high in the movie as it did in this famous production still. The scene, with Tom Ewell admiring his dream girl's pleasure atablast of air through the subway grate, was originally shot near Grand Central Terminal, then reshot onasoundstage. The 20th Century Fox costume designer, William Travilla, dressed Monroe in eight of her movies, but never more memorably than here. Note Marilyn's high heels. Any Manhattan woman would tell you to avoid grates while wearing them.
khet myint myint February 20, 2010 at 2:23 AM
@အန်တီကွန် .. မပေါ့်တပေါ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍..
ကျွန်ုပ်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင်ထင်မိသည်။ sensation ပိုဖြစ်စေသည်လေ။
နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာ ဖိုရမ်သမားများ အချင်းချင်း သုံးကြသည့် ဖိုရမ်သုံးစကားများ ဖြစ်ပါ၏။
မင်မင် = admin
မော်မော် = moderator
()ကွင်းထဲတွင် ရေးလိုရာစာများကို အရောင်မှိန်ရေးပြီး ကျီစယ်ကြသည်မှာလည်း ဖိုရမ်မာတို့ အလေ့ပင်။
မေတ္တာရိ မတတ်တတတ် ရှင်းပြသူ
Vista February 20, 2010 at 9:32 AM
ပုံတူပန်းချီဆွဲရာမှာ ကျနော့်ကိုပံပိုးခဲ့တာ သူ့ ပုံတွေပေါ့ကွယ် အဟက်
ပြောလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး တော်တော့ကိုလှတဲ့ အမျိုးသမီး။
ဒါနဲ့ ကိုဘမူးပြီးရေးတာလားမသိဘူး အောက်ဆုံးပိုက်က ဘာမှန်းကိုမသိဘူး။